प्रधानमन्त्री ओलीको अतिगोप्य डायरी लिक हुँदा भेटियो हटाउन तयारी मन्त्रीहरुको नाम को को परे ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएको छ । सरकारले देशमा विभिन्न किसिमका घटनालाई निरुत्साहित गर्नुको साटो मन्त्रीहरु अयोग्य रहेको भन्दै ओलीले मन्त्रीहरुको लिस्ट तयार पारेका छन् ।
ओलीले असक्षम मन्त्रीहरुको सुचि तयार पारिरहेको स्रोतले जनाएको छ । केहि दिन देखि ओलीले मन्त्रीहरु हटाउन लागेको भन्दै व्यापक चर्चा चलेको थियो । तर, यो हल्ला निराधार भएको भन्दे गृहमन्त्री बादल र प्रधानमन्त्री ओली आफैले स्पष्टिकरण समेत दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले हटाउन तयार पारेको मन्त्रीको नाम एउटा डायरीमा सुरक्षित राखेको जनाइएकोछ । असक्षम मन्त्रीहरुको ‘हिट लिष्ट’ मा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नाम छ ।
यता, नेकपाभित्र अध्यक्षद्धय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नै सहमति बनेर मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न लागिएको बुझिएको छ । अहिले नयाँ मन्त्रीहरु क–कसलाई पठाउने भन्नेबारेपनि दुई अध्यक्षबीच छलफल प्रारम्भिक रुपमा चल्न थालेको छ । तर, नेकपामा यसरी मनोमानी ढंगबाट मन्त्रीहरु हटाउन थाले पार्टी फुट्ने भन्दै नेता माधव नेपालले धम्की समेत दिएको बुझिएको छ ।
Posted on September 15, 2018 Author Categories Big News, फिचर न्युज, मुख्य समाचार, राजनीति
Previous Previous post: देउवाले गरे कञ्चनपुर हत्या प्रकरणमा सरकारको यति ठुलो गल्तिको पर्दाफास, के छ तेस्तो ?
Next Next post: बुद्धबिर लामाको आठौं एकल साँझ राजधानीमा शुक्रबार सम्पन्न